Tarika 'Zay Afa-po ny mpankafy, feno hipoka ny Palais des Sports
Bodo Manao hosodoko ihany koa
Aron’ny harem-bakom-pirenena Malagasy « Tandindomin-doza ireo vakoka eto Antananarivo »
Fahombiazana tanteraka no azon’ny tarika Zay sy ny Ivenco ary ny orinasam-pifandraisana Orange omaly tetsy amin’ny lapan’ny
kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina. Feno hipoka mantsy ity toerana fandraisana lanonana ity, noho ny hamaroan’ireo mpankafy izay notohanam-potsiny. Tsikaritra fa efa ela niandrasana ity mpanakanto ity ny rehetra tao anatin’izay enim-bolana lasa izay. Nahatratra 30 teo ho eo ny hira nohirain’i Nary sy Malala nandritra izany, hira efa saika nahafantarana azy ireo avokoa ankoatra ireo hira vaovao. Naharitra ora telo ny fampisehoana, narahin’ny fandrindrana manara-penitra teo amin’ny lafiny teknika. Tsiahivina fa tonga nampiara-peo tamin’izy ireo ihany koa Raboussa, tao anatin’ilay hiran’ny tarika Zay, mitondra ny lohateny hoe : hatramin’izao iny. Amin’ny taona ho avy indray, araka izany, ny fampisehoana lehibe manaraka, hankalazana ny faha-24 taona niorenan’ny tarika.